८ महिनामा भेरी-बबई डाइभर्सनको आधा सुरुङ खनियो - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
८ महिनामा भेरी-बबई डाइभर्सनको आधा सुरुङ खनियो
असार २८, २०७५ 3321 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
भेरी–बबई बहुउद्देश्य आयोजनाको आधा सुरुङ पूरा भएको छ । मेसिन जडान गरेर खन्न सुरु गरेको ८ महिनामा टिबिएम (टनेल बोरिङ मेसिन) ले बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ५ हजार ६ सय १६ मिटर सुरुङ खनिएको हो । सुरुङको कुल लम्बाई १२ हजार २ सय मिटर छ । अब आयोजनाको ६ हजार ५ सय ८८ मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ ।
नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको अत्याधुनिक मेसिनबाट खन्न सुरु गरिएको सुरुङमा लक्ष्यभन्दा चाँडो प्रगति भइरहेको आयोजना निर्देशक शिवकुमार बस्नेतले बताए । ‘हामी समय तालिकाभन्दा अघि छौं, निर्माणमा अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘आगामी कात्तिकबाट आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युतगृहमा पनि काम सुरु गर्छौं ।’
सुरुङ सकिँदा अबको २ वर्षभित्र हेडवर्क्स र विद्युतगृहको निर्माण पनि पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बस्नेतले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागको सहकार्यमा डिजाइन भएको आयोजनाबाट ४६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । २०७४ कात्तिक २० गते (नोभेम्बर ६, २०१७) देखि आयोजनाको सुरुङ खन्न सुरु गरिएको थियो । सुरुङ, बाँध तथा विद्युतगृह निर्माण गरी आयोजनालाई ३ चरणमा विभाजन गरिएको छ ।
भेरी नदीको पानी ४.२ डायमिटरको १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट बबईमा मिसाइनेछ । मेसिनले सुरुङ खन्नुअघि करिब १५० मिटर परम्परागत प्रणाली (ड्रिलिङ एन्ड ब्लाष्टिङ) बाट सुरुङ खनिएको थियो । खन्न सुरु गरेको दुई वर्षभित्र सुर्खेत हात्तीखालबाट बाँधस्थल चिप्लेसम्म सुरुङ निर्माण हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सुरु भएको आयोजनाका सबै चरणका काम (सुरुङ, बाँध, विद्युतगृह) आव २०७७/७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको सुरु लागत १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि पूरा हुँदासम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । चीनको चाइना ओभर्सिज गु्रप कम्पनी (कोभेक) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । आयोजना पूरा भएपछि ४६ मेगावाट विद्युतसहित बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।